COLKA WARAF MA LAGU DAYAY
Colaadda u dhaxaysa soomaalida geeska Africa iyo hoggaanka burcadda ah ee Ethiopia, waa colaad soo taxnayd tafaha quruumaha tagay.
Markay sanado yaree seexato, islamarkiiba unkadka ololkeeda ayaa dib u aloosmayay.
Damaca is ballaarinta ee damiirkooda dagay ayaa markastaba u sheegayay inay mugdiga badda madow mar uun soo taabtaan.
Hasayeeshee halgamaaga xaq u dirirka, hoggaankiisa suubban iyo hankiisa wayn hubkiisu ha yaraadee ayaa hor istaagay.
Markasta ethiopianku soomalida waa ka tiro iyo tayaba badnaayeen, sababtoo ah, Ethiopia Somali ka badan, quwadaha shisheeyuhuna waxay u aqoonsan yihiin haraadiga masiixiyadda ee geeska Africa.
Halganka soo jireenka ah ee waligii ka dhexjiray Somalida iyo Ethiopianka, kullligiis lama diiwaan galin sidii ku habboonayd, laakiinse waxaa jira sheekooyin badan iyo dhacdooyin raad leh oo halgankaan ka haray, waxaana ka mid ah tan soo socota.
Waxaa la sheegay waqti hore oo aan hadda la xadayn Karin taariikhdiisa, ayey ethiopianku ku soo duuleen soomaalida, oo ayagu markaas daggan geeska bari ee fog ee dalka.
Dagaaladdii ayaa soomalidu aad ugu hoobatay, sababtoo ah cadowgu waa ka tiro badan yahay, waana ka hub wanaagsan yahay.
Raggii taladu ka go�day ayaa isasoo hor fariistay, markaas ayaa la yiri rag Allow xaaladda waad u jeedaane tala keena sidee nimanka isaga celinnaa! .
Markii hadalkii cabbaar la jiiday, ayaa nin asagu aamusnaa hadlay oo yiri, ragoow COLKA WARAF MA LAGU DAYAY.
Figraddaan ayaa raggii soo jiidatay, markaas ayaa waxaa la diyaariyay labo col oo min labo boqol ah, waxaana loo dhiibay warfo xargahooda aad loo soohay, raggaanina waa rag aad loogu taba baray rididda warafka iyo ku aaddinka dhagaxa cidda loo wado.
Raggaan ayaa waxaa la kala saaray labo buurood oo hareeraha ka xiga halka la filayo in cadowgu ku soo aaddan yahay.
Markii cadowgii barxadda dhexe marayo ayaa dhagaxaas roobka lagaga dhigay, ciddii uu asiibo dhaguxu kuma taqaan ama qof ha noqoto amase faraskiisee, adiguba qiyaas dhagaxaasi xawliga uu ku socdo iyo cidda uu madaxa ka haleelo.
Halkaas ayaa cadowgii si ballaaran dhulka u daatay, markaas ayaa waxaa weeraray colkii seefaha iyo warmaha ku hubaynsaa oo ayaguna diyaarsanaa, maalinkaas ayaa Ethiopiankii sidii balkii loo xasuuqay, sababtoo ah waxaa helay taagtiig dagaal oo aysan marnaba iska jirin.
Baqtigii cadowga ayaa, xabaalo waawayn oo dhexda laga qoday lagu qariyay, hadaba soomaalidu waxyaalaha ay aaminsan tahay waxaa ka mid ah, in qabuuraha faataxada lagu akhriyo, cawus qoyanna lagu dultuuro.
Markii dhacdadaan ugu qaraan qarni laga joogay, ayaa dadka xog ma qabtada ah ee meesha soo marayaaa waxay bilaabeen inay faaxada ku akhriyaan.
Markaas ayaa nin taariikhdaan la socday waxaa uu ka taagay tabbeelle caddaynaya in dadka meeshaan ku aasan ay gaalo yihiin, sidaa darteed aan lagu akhrin Karin faataxada.
Markaas ayaa waxaa loo bixiyay XABAALO FAATAXO, oo ah magaca halkaas maanta loo yaqaan.
Maahmaahdaan (colka waraf malagu dayay) hadda waxaa loo isticmaalaa waxa xalkooda la raadinayo laakiin aan wali lahayn �war colka waraf ma lagu dayay�.
Faafin: SomaliTalk.com | Feb 22, 2007